iPhone 6s - iPhone Nhau | IPhone nhau
Zvese nezvake Apple iPhone 6s. Nhau, zvigadziriso, zvishongedzo, dzidziso uye madanho eiyo nyowani Apple nhare muna 2015. Tsvaga maficha eiyo iPhone 6s uye tora uchisvetukira kuchizvarwa chinotevera.
Zvimiro zveiyo iPhone 6s
Yakashongedzerwa ne processor Apple A9, iPhone 6s inokurumidza uye inowedzera simba, chimwe chinhu chine hunhu hwakanaka pahupenyu hwebhatiri. Hatigoni kukanganwa nezvazvo 2 GB RAM ndangariro iPhone 6s, chimwe chinhu chinokutendera iwe kuti uve nemaapplication akawanda uye mapeji ewebhu akavhurwa kumashure pasina kudzoreredza. Panyaya yekuita, Apple A9 ine CPU 70% ine simba kupfuura Apple A8 uye GPU inosvika 90% inokwanisa.
Nyowani iPhone 6s yekumashure kamera Ino vimbisa kutora mifananidzo iri nani mune chero mamiriro akareruka nekutenda kune yayo nyowani 12 megapixel sensor, inovandudza kupinza uye kujekesa ruzivo senge hapana imwe Apple nhare yaita. Izvo zvinongoyevedza. Izvo zvakare inokwanisa kutora 4K mavhidhiyo.
Kunyangwe dhizaini yeiyo iPhone 6s yakafanana neiyo iPhone 6, pane zvakawanda shanduko izvo Apple yakaunza mukati mukati mayo nharembozha ine yayo nyowani 7000 dzakateedzana aluminium dzimba, 4,7 inch screen iine 3D Kubata uye resolution 1334 x 750 pixels, yechipiri chizvarwa Kubata ID sensor nekukurumidza kubhadhara uchishandisa Apple Pay uye yakagadzirirwa iOS 9.
Nakidzwa ne itsva iPhone 6s uye sarudza iyo vara raunofarira zvakanyanya: grey nzvimbo, goridhe, sirivheri nechena kumberi kana nyowani yepinki hue zvakare inovimbisa kuve inotengesa zvakanyanya.
Nhau nezve iyo iPhone 6s
Zvinotaridza kunge zvakasimbiswa kuti iOS 15 haizosvika kune iyo iPhone 6s kana iyo yekutanga iPhone SE
kubudikidza Ignacio Sala inoita 5 mwedzi .
Kana vhezheni nyowani yeIOS yarova pamusika, uye zvishandiso zvinoenderana zvinosimbiswa zviri pamutemo, ...
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 2 makore .
kubudikidza Luis Padilla inoita 3 makore .
Vhidhiyo yeiyo iPhone 6s inoputika iyo inomutsa kusahadzika kwakawanda
Ichokwadi kuti pane dzimwe nguva takaona mabhatiri achipisa kana kunyange vashandisi vakatsva nechimwe chirema ...
Iko kumberi uye shure kweiyo iPhone 6S mushure mekutsiva bhatiri
kubudikidza Ruben gallardo inoita 3 makore .
Kana parizvino usati waziva, wakavharirwa mubako. Apple inozivikanwa mu ...
kubudikidza Ignacio Sala inoita 4 makore .
Pamwe chete kunyunyuta kwevatengi kupokana neApple kuChina pamusoro peiyo iPhone 6s moto
Apple haina nguva yakanaka nemabhatiri eiyo iPhone 6s uye semuenzaniso isu tatova ne ...
Apple inogadzirira chishandiso chekuongorora matambudziko nebhatiri
kubudikidza Alvaro Fuentes inoita 5 makore .
Mazuva mashoma mushure mekuburitswa kweshoko paApple's Chinese webhusaiti maererano nedambudziko ...
Tarisa kana yako iPhone 6s iri muchirongwa cheApple chekutsiva bhatiri
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 5 makore .
Iko hakuna chakakwana, uye ndosaka pave paine akawanda maDevices akawana iyo isinganzwisisike ...
kubudikidza Ignacio Sala inoita 5 makore .